Otu n'ime vidiyo vidio kachasị ewu ewu anyị na-ada n'ụwa niile. Nhazi mgbe anyị aha ọjọọ "NYE Countdown 2013", anyị mere nke a a ga-Dj video intro maka gị agha! A na-agbakwụnye aha aha gị na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị na video a haziri ahazi na enweghị ụgwọ ọzọ.
"MESDAMES ET MESSIEURS, m ga-elebara gị anya ma ọ bụrụ na ị chọrọ! SIGNORE E SIGNORI, ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla na-enweghị mmasị! NDỊ MGBE NA NDỊ MGBA NA-AHỤTA M KA M GA-EKWESỊTA M? IHE Ị NA-EKWU NDỊ MMADỤ BỤ EZIOKWU. IHE Ị NA-EBE ECHICHE NA-AGBA. 'Anyị agaba!' (gbasaa) Dj (Aha gị) site na (CLUB ma ọ bụ ụlọ ọrụ - CITY / TOWN) ... Ebe ọ bụ! " (Nhọrọ)
AKWỤKWỌ: "MESDAMES ET MESSIEURS, m ga-elebara gị anya ma ọ bụrụ na ị chọrọ! SIGNORE E SIGNORI, ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla na-enweghị mmasị! NDỊ MGBE NA NDỊ MGBA NA-AHỤTA M KA M GA-EKWESỊTA M? IHE Ị NA-EKWU NDỊ MMADỤ BỤ EZIOKWU. IHE Ị NA-EBE ECHICHE NA-AGBA. 'Anyị agaba!' (gbasaa) Dj (Aha gị) site na (CLUB ma ọ bụ ụlọ ọrụ - CITY / TOWN) ... Nkeji! "(nhọrọ)